မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2016-03 > ယေရှု၏လာမယ့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ဒုတိယ
တမန်တော်များ၏ တမန်တော်များ တွင်၊ 1,9 wird uns gesagt: «Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg.» Ich möchte an dieser Stelle eine einfache Frage stellen: Warum? Warum wurde Jesus auf diese Art weggenommen? Aber bevor wir dazu kommen, lesen wir die nächsten drei Verse: «Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weissen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heisst Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt.»
ဤကျမ်းပိုဒ်သည်သခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူပြီးသူပြန်ကြွလာမည့်အချက်နှစ်ချက်ကိုဖော်ပြသည်။ အချက်နှစ်ချက်စလုံးသည်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောကြောင့်တမန်တော်များ၏ယုံကြည်ချက်တွင်ကျောက်ချရပ်နားထားသည်။ ဦး ဆုံး၊ ယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့တက်ကြွခဲ့သည်။ တက်မြန်းသည့်နေ့သည်နှစ်စဉ်အီစတာပွဲပြီးနောက် ၄၀ နှစ်ဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့တွင်ဖြစ်သည်။
ယေရှုဟာသူ့ခမည်းတော်ဆီသွားပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ကြွလာမယ်ဆိုတာကိုတပည့်တော်များကိုပြောပြဖို့အရမ်းလွယ်သွားမှာပါ။ ထို့နောက်သူသည်ယခင်ကအကြိမ်များစွာပြုခဲ့သကဲ့သို့ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့သူပြန်မတွေ့ရတော့ဘူး သခင်ယေရှုမြေကြီးပေါ်မှထွက်ခွာသွားခြင်းအတွက်မည်သည့်ဘာသာရေးအကြောင်းပြချက်ကိုမျှကျွန်ုပ်မစဉ်းစားနိုင်သော်လည်းသူသည်တပည့်တော်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလည်းတစ်စုံတစ်ခုကိုသင်ကြားပေးခဲ့သည်။
လေထဲကိုသိသိသာသာပျောက်ကွယ်သွားခြင်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုသည်သူသည်ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ထာဝရယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ခမည်းတော်၏လက်ျာဘက်၌ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရန်နှင့်ကောင်းမွန်သောစကားလုံးဖြင့်ပြောဆိုရန်ကောင်းကင်သို့တက်ကြွကြောင်းရှင်းလင်းစွာပြောကြားခဲ့သည်။ စာရေးသူတစ် ဦး က“ သူကငါတို့ရဲ့ကောင်းကင်မှာကိုယ်စားလှယ်ပဲ” ဟုပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်မည်သူဖြစ်ကြောင်းကိုနားလည်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အားနည်းချက်များကိုနားလည်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုသိသောကောင်းကင်၌ကျွန်ုပ်တို့တွင်လူသားတစ် ဦး ရှိသည်။ သူသည်ကောင်းကင်၌ပင်လူသားအပြည့်အဝရှိပြီးဘုရားသခင်လည်းဖြစ်သည်။
တက်ကြွစွာတက်ကြွပြီးနောက်၌ပင်သူ့ကိုသမ္မာကျမ်းစာမှလူသားတစ် ဦး အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ Areopagus ရှိအေသင်မြို့သားတို့အားပေါလုတရားဟောသောအခါဘုရားသခင်ကသူအားခန့်ထားသူနှင့်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုတရားစီရင်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ တိမောသေထံစာရေးသောအခါသူ့ကိုယေရှုခရစ်ဟုခေါ်ခဲ့သည်။ သူသည်ယခုလူသားဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်၍ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အလောင်းတော်သည်သေခြင်းမှထမြောက်။ ၊ ကောင်းကင်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံပြီးမှ၊
ဒါကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်မှာလဲ။ အာကာသ၊ အရာဝတ္ထုနှင့်အချိန်တို့နှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲနေရာတိုင်း၌တည်ရှိနေသောဘုရားသခင်သည်မည်သို့သောနေရာ၌ရှိနေသည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမည်သို့ရရှိနိုင်မည်နည်း။ ယေရှုခရစ်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်စကြဝinာတွင်တစ်နေရာတည်းတွင်တည်ရှိသလား။ ငါမသိဘူး။ သခင်ယေရှုသည်တံခါးပိတ်နောက်ကွယ်မှမည်သို့ကြွလာသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ သူသည်ဆွဲငင်အားမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ သူကောင်းကင်သို့မည်သို့တက်ကြွခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ရူပနိယာမတရားများသည်ယေရှုခရစ်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုဖြစ်ဆဲဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။
ဒါကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုတော့မဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူး။ ဒီဟာကစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိဖို့လိုသည်။ သခင်ယေရှု၏ ၀ ိညာဉ်တော်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းသိရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အလယ်၌ဤကမ္ဘာပေါ်၌အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုသည်မိမိ၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသောအခါသူသည်လူသားနှင့်ဘုရားဖြစ်မည်ဟုရှင်းလင်းစွာပြောကြားခဲ့သည်။ ဟေဗြဲဘာသာတွင်ရေးသားထားသည့်အတိုင်းသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အားနည်းချက်များကိုအကျွမ်းတဝင်သိသောယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်သည်ကို၎င်းကအာမခံသည်။ သူ၏မြင်နိုင်သောကောင်းကင်သို့တက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူသည်ပျောက်ကွယ်သွားရုံမျှသာမဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖျန်ဖြေသူနှင့်ဖျန်ဖြေသူအဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ထပ်မံအာမခံထားသည်။
ပင်တေကုတ္တေပွဲမတိုင်မီယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ခဲ့ပုံရသည်။ သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူကြောင်းကိုတပည့်တော်များမြင်သောအခါသူတို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိမည်ဟူသောကတိတော်ကိုရရှိထားကြသဖြင့် ၀ မ်းနည်းစရာအကြောင်းမရှိပါ။ အသွေးအသား၊ ယေရှုနှင့်အတူကောင်းသောနေ့ရက်များကုန်ဆုံးသွားသည့်အတွက်ဝမ်းနည်းစရာမရှိပါ။ အတိတ်ကိုဖုံးကွယ်မထားခဲ့သော်လည်းအနာဂတ်ကိုရွှင်လန်းစွာမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုကတိထားတော်မူသော၊ ဂတိထားတော်မူသော သာ၍ ကြီးမြတ်သောအရာတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏။
တမန်တော်ဝတ္ထုကိုဖတ်လျှင်နောက်လိုက် ၁၂၀ တွင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်။ သူတို့သည်အတူတကွစုရုံးဆုတောင်းကာလုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းကိုစီစဉ်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့မှာတာဝန်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာသိထားတဲ့အတွက်ယုဒရှကာရုတ်ရာထူးကိုထမ်းဆောင်ဖို့တမန်တော်အသစ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်တည်ဆောက်မည့်Israelသရေလလူမျိုးသစ်ကိုကိုယ်စားပြုရန်လူ ၁၂ ယောက်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းသူတို့သိသည်။ သူတို့မှာစီးပွားရေးလုပ်လို့သူတို့အစည်းအဝေးလုပ်တယ်။ သခင်ယေရှုသည်သက်သေများအနေဖြင့်ဤလောကသို့သွားရန်တာဝန်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အထက်မှစွမ်းအားနှင့်ပြည့်နေပြီးကတိထားတော်မူသောနှစ်သိမ့်မှုကိုလက်ခံသည့်အထိယေရုရှလင်မြို့၌သူတို့စောင့်ဆိုင်းနေရသည်။
သခင်ယေရှု၏တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်တင်းမာမှုတခဏဖြစ်ခဲ့သည်။ တပည့်များသည်သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုးချဲ့ရန်နောက်အဆင့်ကိုစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြသောကြောင့်ယေရှုကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်သခင်ယေရှုထက် သာ၍ ကြီးသောအရာများကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ယေရှုသည် သာ၍ ကြီးသောအရာများ၏ကတိတော်ဖြစ်သည်။
သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ကို“ နှစ်သိမ့်ပေးသူ” ဟုသခင်ယေရှုမိန့်ဆိုခဲ့သည်။ ဂရိတွင် "နောက်ထပ်" အတွက်စာလုံးနှစ်လုံးရှိသည်။ တစ်ခုမှာ "တူညီသောအရာ" ကိုဆိုလိုသည်။ ယရှေုသညျ "ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခု" ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုနှင့်တူ၏။ ၀ ိညာဉ်သည်ဘုရားသခင့်ထံတော်မှရောက်ရှိခြင်းမဟုတ်ဘဲသဘာဝလွန်စွမ်းအားတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်အသက်ရှင်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါး၊ ဘုရားသခင့်ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သခင်ယေရှုနှင့်အလွန်ဆင်တူသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ခရစ်ယာန်အသင်းတော်၌နေထိုင်သောယေရှုအကြောင်းကိုလည်းပြောနိုင်သည်။ သခင်ယေရှုကသူသည်ယုံကြည်သူ၊ အသက်ရှင်သူ၊ သူ၌သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သူနှင့်အတူရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ယေရှုသည်ထွက်သွားသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုတစ်ကိုယ်တည်းမထားခဲ့ပါ။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌နေသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြန်လာခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မြင်နိုင်သောနည်းဖြင့်ပြန်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သူ၏မြင်နိုင်သည့်တက်ကြွမှု၏အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုသည်သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီရှိပြီး ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ၌ရှိသောအရာများထက်ကိုယ်တော်ထံမှ ပို၍ မျှော်လင့်မထားသင့်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောခြင်းမရှိပါ။
မဟုတ်ပါ၊ သခင်ယေရှုကသူပြန်လာခြင်းသည်မမြင်ရသောလျှို့ဝှက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။ ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ထင်ရှားစွာဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်။ မိုlight်းလင်းနှင့်နေထွက်သကဲ့သို့မြင်နိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း ၂,၀၀၀ နီးပါးကသံလွင်တောင်ပေါ်ရှိလူတိုင်းကိုတက်ကြွစွာတက်ကြွစွာမြင်တွေ့နိုင်သကဲ့သို့၎င်းကိုလူတိုင်းမြင်နိုင်ကြလိမ့်မည်။ ထိုအချက်ကကျွန်ုပ်တို့အားမျှော်လင့်ထားသည်ထက်ယခုမျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပို၍ မျှော်လင့်နိုင်သည်။ အခုငါတို့အားနည်းချက်တွေအများကြီးတွေ့နေရတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌၎င်း၊ ခရစ်ယာန်ဘောင်တစ်ခုလုံး၌အားနည်းချက်။ အရာရာသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေသို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ သူသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလမ်းဖြင့်ပြန်လာပြီးဘုရားသခင်၏ထင်မြင်ချက်ထက် ပို၍ ကြီးမား။ အားကောင်းလာလိမ့်မည်ဟုခရစ်တော်၏ကတိတော်ရှိသည်။ သူဟာအခုသူတို့လိုအရာတွေကိုစွန့်ခွာမှာမဟုတ်ဘူး။
Wir wissen nicht, wann all das geschehen wird. Macht es daher einen Unterschied in unserem Leben? Das sollte es. Im 1. Korinther und 1. Johannes wird uns davon berichtet. Lasst uns 1. ဂျိုဟန် 3,2-3 ansehen:
«ချစ်လှစွာသောချစ်သားတို့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင့်သားသမီးများဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့မူကား၊ ငါတို့မူကားသိရကြလိမ့်မည်။ ကိုယ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်အတိုင်းကိုငါတို့သည်မြင်ရကြလတံ့။ ထိုသို့မြော်လင့်သောသူမည်သည်ကား၊ ကိုယ်တော်သန့်ရှင်းတော်မူသည်နည်းတူ၊
ထို့နောက်ယောဟန်ကယုံကြည်သူများသည်ဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်ပြီးအပြစ်ပြုသည့်ဘဝကိုမခံလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရာ၏လက်တွေ့ကျသောအကျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည်တဖန်ကြွလာတော်မူမည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်သို့မဟုတ်အပြစ်ရှိသည်ဟုမဆိုလိုပါ၊ သို့သော်ဘုရားသခင့်အလိုတော်နှင့်အညီအပြစ်ပြုခြင်းကိုမလိုက်နာကြောင်းဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
ပထမတပည့်တော်များသည်ထိုအချိန်ကလုပ်ရန်အလုပ်ရှိသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရန်အလုပ်ရှိပါသည်။ သခင်ယေရှုပေးသောတာဝန်မှာလည်းကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်။ သတင်းကောင်းဟောပြောခြင်းနှင့်ဟောပြောခြင်းတို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်၎င်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးကောင်းကင်သို့မျှော်ကြည့်။ ခရစ်တော်ကိုမျှော်လင့်လျက်ရပ်တည်ကြသည်မဟုတ်။ အချိန်အတိအကျအတိအကျပြောရန်သမ္မာကျမ်းစာကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့မလိုအပ်ပါ။ သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာသည်ကိုမသိရန်ကျမ်းစာကပြောထားသည်။ ၎င်းအစားကျွန်ုပ်တို့သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်ကတိရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့အတွက်လုံလောက်သင့်သည်။ လုပ်ဆောင်ရန်အလုပ်ရှိပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ခုလုံးဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့စိန်ခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့်သခင်ဘုရား၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းသည်အချည်းနှီးမဟုတ်။